Turkigu Muxuu ka rabaa Soomaaliya? Qorma xasaasi ah. - iftineducation.com
Turki iyo Somalia
iftineducation.com – Wax aan khayr ahayn Turkigu kama dooni karo Soomaaliya, waayo waa ummad Islaam ah oo weliba taariikh dheer oo qurux badan ku leh soo yaalka Islaamka.
Waxaan og nahay in laga soo bilaabo qaybsashadii Afrika 1884tii gaaladii gumaysiga ahayd uu xiriirka iyaga iyo shacabka Islaamka ah ee Soomaaliyeed ka dhexeeyey uu isla beddelayey hadba xaaladda lagu jiro ilaa iyo maantana ay gaaladu faraha kula jiraan xaaladda gaarka ah ee Soomaaliya.
Sida la wada og yahay Turkigu in badan ayuu geed sare iyo geed hooseba u fuulay in uu ka mid noqdo midawga Yurub oo hadda ku dambeeya fashal. Markii uu arkay in loogu diiddan yahay muslimnimada ayuu qaatay hindise ah oo maad mar kale ka dib burburkii ku dhacay dawladdii Islaamka ahayd ee ay iyagu hogaamin jireen abaabushid midawga Islaamka. Waana arrin aad khayr u ah aniguna qof ahaan waa ku bogaadinayaa.
Sida uu rasuulku na faray wuxuu noo sheegay in qofka Islaamka aad in uu wanaag wado ka dhigtid si kasta oo uu kuula qalloocan yahay ama aad uga shakisan tahay. Sidaas darteed marna anigu uma arko in ummad Islaam ahi ay dhibaato la dooni karto ummad kale oo Islaam ah.
Turkigu meel aad u qiimo badan ayuu ummadda Islaamka ah ee Soomaalida uga soo baxay waayihii ay abaaruhu haysteen. Wuxuuna cunto iyo daawo gaadhsiiyey dhulka ay Shabaabtu gacanta ku hayso.
Waxaana markaas cadawga ummadda Soomaaliyeed bahdiisa gaalada kula dhex meeraysanayey in dhulka ay Shabaabtu xukunto xoog lagu geeyo gargaarka, taas oo ay doonayeen in ay dadkaas ku xasuuqaan meelaha ay joogaan oo ay ku haysteen nabad. Arinkaas wuxuu fashilay markii ay Turkigu Shabaabtii dhex tageen ee ay cunto iyo daayo u qaybiyeen dadkii ay abaaruhu hayeen. Waxayna caddeeyeen in ay nabad iyo maamul wanaagsani ka jiro, taas ayaa dhulka ku dhufatay qorshii ay gaalada cadawga u ah Soomaalidu wadatay.
Waxaan la soconnaa in Turkigu ay Soomaaliya ka wadaan hawlo ay shacabka walaalahood ee Islaamka ah ay ugu hiilinayaan. Waxayna hadda gobolada Soomaaliya oo dhan ka wadaan dhismayaal cisbataallo, dugsiyo, jidad, koronto iyo biyo gelin. Waana dhammaan adeeg ay iska lee dahay bulshadu oo ay ahayd in ay dawladi haddii ay jirto qabato.
Dawlad ku sheegta maanta jirtaana waa argagixiso la dagaalan waxayna ku wajahan tahay in ay Shabaabta la dagaalamaan oo keliya. Marka haddii uu Turkigu u soo gurmado walaalahooda Islaamka ah waxna u qabto isaga oo Alle la kaashanaya maxaa lagu eedaynayaa.
Eedaynta ay Shabaabtu u soo jeedisay dawladda Turkiga waxaan u arkaa in ay tahay mid aan sal iyo raad lahayn ayna ka dhex muuqato hunguri doonimo ay doonayaan in Turkigu waxyaabaha ay wadaan ay geeyaan dhulka ay Shabaabtu ka taliso, intaas oo keliya ayaa ku kalliftay Shabaabtu in ay dawladda Turkiga u soo jeediyaan eedayn.
Eedaynta noocaas salka ku haysaana waa la hubaa in aanay waxba ka jirin. In dad sheeganaya Islaamnimo ay muslim iyo gaal toona ku eedeeyaan dembi aanay lahaynna waa arrin diinta Islaamka aad loogaga hadlay oo ah masabid iyo ka been sheegid xaqa jira.
Waxaan soo xusayaa aayadda hoos ku minguursan oo ka hadlaysa in ruux ama ummad la saaro dembi aanay lahayni ka mid tahay, dembiyada lagu cadaabta muto ee waaweyn ayna sida rasuulku sheegay ka xun tahay xanta.
Waxaan ugu baaqayaa shabaabtu in ay arrinkaas ka toobad keenaan Turkigana weydiistaan cafis haddii ay yihiin dad Islaam ah waayo waxay ku jiraan dembi cad oo aan gabasho lahayn. Mu’aamaradaha noocaas ah waxaa ka dambeeya oo sidaas kula taliyey waa kuwa ka midka ah qabaa’ilka kale ee aan
Soomaalida ahayn ama ka midka ahayn shacabka Soomaaliyeed, kana soo jeeda qabaa’ilka kale sida Aljeeriya, Baakistaan iyo wixii la mid ah.